5 calaamadood oo ay leedahay raali galinta dumarku doonayaan | Raganimo University
5 calaamadood oo ay leedahay raali galinta dumarku doonayaan
February 26, 20193 minutes
Soomaalidu in ay madax adagyihiin waa mid aduunku wada ogyahay, waliba qaar ka mid ah ragga Soomaalida ayaa madax adayga dartiis u burburiya reerkooda, iyagoo ku badbaadin kara labo eray oo keliya: Waa ka xumahahay! Hadaba ragoow sidee ayaad isku jilcin kartaan oo markii qalad dhaco gacalisadaada u raali galin kartaa?
Raali galintu waa raganimo
Ninka aqoonsada qaladkiisa isla markaana diyaar u ah in uu raali galin ka bixiyo waa nin raganimo leh. Raga waxaa qaribay waa isla weynida iyo yaan lagaa dareemin daciifnimo balse arintu sidaa ma ahan. Haddii aad ogtahay in aad ka qaldantahay gacalisadaada, oo aad raali galiso waxay u badantahay in ay kuu aqoonsan doonto nin karti leh isla markaana ay kalsoonidiina kor u qaadi doonto.
Iska ilaali meermeerka
Dad badan ayaa iyaga oo doonaya in ay raali galin bixiyaan ayay hadana darbiyada ku meereystaan, iyagoo marmarsiyo u raadinaya qaladkooda. Waxaas muhiim ma ahan. Mar haddii qorshahaaga uu yahay in aad gacalisadaada raali galiso waxaa lagaa rabaa in aadan wax sharaxaad ah galin iyo sidaa ayay wax u dheceen balse aad u soo dhaadhacyo muhiimada. Haddii aad meermeersi iyo sharaxaad la timaado inta aadan raali galinta bixin waxay u badantahay in taasi ay ka dhigayso in gacalisadaada ay u aragro raali galintaada mid aan daacad kaa ahayn.
Si toos ah u dheh
Marka ay timaado in aad afkaaga ka dhaho raali galinta. Waxaa jira erayo ku haboon iyo kuwa aan ku habooneyn. Waxaa jira erayo muujinaya in ay daacad kaa tahay oo ay niyadaada ka soo go'day raali galintu. Haka leexan dhabta oo si toos u dheh: "gacaliso waan ka xumahay". "Waan kaa raali galinayaa qaladkaas". "I cafi waan kaa qaldamaye." iwm. Waxaad dooneysaa in raali galintaada la fahmo oo lagaa aqbalo isla markaana ay soo afjarto wixii xumaan ah ee idin soo kala dhexgalay. Hadaba si aad ugu guuleysato midaas ha noqoto mid waadax ah oo niyadaada ka soo go'day.
Cadee qaladkaad gashay
Waan ka xumahay oo keliya raali galin ma ahan, oo su'aasha ku xigta ayaa ah: maxaad ka xuntahay? Dumarku qaasatan waxay jecelyihiin faahfaahinta. Sidaad darteed waxaa muhiim ah in aad cadeyso qaladkaad gashay iyo dhaawaca uu geystay. "Waan ka xumahay in aan sidaa kugu sameeyay" ama "dhaawaca aan kuu geystay" iwm. Qaasatan marka aad raali galinayso gacalisadaada waxaa muhiim ah in aad cadeyso sida aad qalbigeeda u dhaawacday. Taasi waxay u muujinaysaa in aad fahantay oo aad ka qoomamaysay wixii aad samaysay.
Cadee sida aad u saxayso
Raali galin kaliya arinta kuma dhamaanayso, ee marka aad raali galinta bixiso waxaa muhiim ah in aad cadeyso in qaladkaas aad saxayso ama aadan dib dambe ugu laabanayn. Halka aad ku mashquuli lahayd sharaxaada wixii dhacay, waxaa ka muhiimsan in aad sheegto talaabooyinka aad qaadayso mustaqbalka si uusan soo laaban. "Galaciso ka raali noqo arintaan sameeyay, waxaan balan qaadayaa in aysan dib dambe u dhicin oo waxaan samaynayaa sidaa iyo sidaa." ayaad dhihi kartaa iwm.